I-China Ukusika umata we-Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Ukusika Mat we-Cricut Joy Maker Ukwakha nefektri | U-Allwin
Ukusika umata we-Cricut, 9924, 12 ″ x24, Ukusika Mat we-Cricut Joy Maker
• Sebenza ngokuphelele kuCricut Hlola i-Air 2 eyinhloko umshini wensimbi wokusika we-DIY.
• Ukubamba okunamandla kokunamathisela okunamathelayo kwenziwe ngokwezifiso zesisindo esincane, izinto ezinconyiwe zekhadikhadi eliwugqinsi, ubucwebe bekhadi, izinto zikazibuthe, ibhodi leposta, indwangu ene-stiffener.
• Umata wokusika obuyiselwe wenziwe nge-Premium yekhwalithi ye-PVC, i-Adhesive tacky Cutting mat nge-12 * 24 (intshi)
• Gcina ikhava yefilimu ecacile kulezi zingubo zokusika ze-Silhouette cameo lapho isitolo ukugcina ukusika ukhuni lukhuni ngaphandle kwezicucu nothuli. Sebenzisa iscraper ukusula izingcezu ezeqile kanye ne-spatula ukususa ngokucophelela izithombe ezisikiwe.
• Lawa ma-Mats anezinga elifanele lokubamba izinto zakho ziqine ngesikhathi futhi avumela ukususwa kalula kwento. Ukusika umata kuhle kubadwebi, ama-quilters, abafundi bezobuciko kanye nama-hobbyists ukwenza ama-DIY Projects amaningi.
Inombolo Yemodeli Yento 9924
Ubukhulu bomkhiqizo (Usayizi ogcwele) 330x660 mm
Usayizi (Usayizi Ukuphrinta) 12 x 24 INCH
Suit for Machine OkweCricut Hlola i-Air 2
Umshini wokusika ohlanganisiwe, ubukhulu bensimbi engu-0.5mm. Indaba i-PVC esobala. Ukunamathela kunezinhlobo ezimbili: ukunamathela okuphezulu nokunamathela okujwayelekile.Sinabo futhi abanye osayizi: 12 "x 12", 12 "X 8", 12 "x 6", 4.5 "x 12", 4.5 "x 6.5" inches.
Langaphambilini Ukusika umata we-Cricut, 9912, 12 ″ x12, Ukusika Mat we-Cricut Maker
Olandelayo: 5 izingqimba A0 Cutting Mat, 661A0, Self ukuphilisa Cutting mat
Ukusika Mat for Silhouette, 8824, 12 ″ x24 & ...
Ukusika Mat for Silhouette, 8812, 12 ″ x12 & ...
3 izingqimba A2 Cutting Mat, 883A2, Self ukuphulukisa Cu ...
3 izingqimba A4 Cutting Mat, 883A4, Self ukuphulukisa Cu ...
5 izingqimba A2 Cutting Mat, 661A2, Self ukuphulukisa Cu ...